१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार शुचि खबर	0 Comments
बिहिबार राती सम्पन्न खेलमा कोलकाता चेन्नई सुपर किंग्ससँग पराजित भएसँगै प्ले अफको सम्भावना कठिन बनेको छ । जितका लागि १ सय ७३ रन पछ्याएको चेन्नईले २० ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो ।
त्यसअघि दुबई इन्टरनेशल क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कोलकाताले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा १ सय ७२ रन बनायो । कोलकाता ओपनर नितेश राणाले ६१ बलमा १० चौका र ४ छक्का सहित सर्वाधिक ८७ रनको योगदान दिएपनि टोलीको हार टार्न सकेनन् ।
करण शर्माले ४ ओभरमा ३५ रन खर्चेर १ विकेट लिए । मिचेल सान्टनारले ३ ओभरमा ३० रन खर्चेर १ विकेट लिए । रविन्द्र जडेजाले ३ ओभरमा २० रन खर्चेर १ विकेट लिए । एनगिडीले ४ ओभरमा ३४ रन खर्चेर २ विकेट लिए । यो हारसँगै कोलकाताको प्ले अफको सम्भावना कठिन बनेको छ । अब कोलकाता अन्य टोलीमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । कोलकाताले अन्तिम खेल आइतबार राजस्थान रोयल्ससँग खेल्ने छ । चेन्नईले अन्तिम खेल आइतबार किंग्स इलेभेने पन्जाबसँग खेल्ने छ ।
कोलकाता १३ खेलमा ६ मा जित र ७ मा हार सहित पाँचौ स्थानमा छ । सनराइजर्स हैदराबाद १२ खेलमा ७ मा हार र ५ मा जित सहित छैटौं स्थानमा छ । राजस्थान १२ खेलमा ७ मा हार र ५ मा जित सहित सातौं स्थानमा छ । चेन्नई सुपर किंग्स १३ खेलमा ८ मा हार र ५ मा जित सहित पुछारमा छ ।
← आजको राशिफल, वि.सं. २०७७।०७।१४ (ई.स‌ं. 30 October 2020)
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गर्यो ११.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा →
पन्जाबको उत्कृष्ट जित, दिल्ली क्यापिटल्स ५ विकेटले पराजित
मुम्बईको दोस्रो जित
राजस्थान रोयल्स कोलकातासँग ६० रनले पराजित